सरलता भएन भने त मान्छेको गहना नै भएन नि : देवेन्द्र केसी | साहित्यपोस्ट
सरलता भएन भने त मान्छेको गहना नै भएन नि : देवेन्द्र केसी
अन्तरंग देवेन्द्र केसीसँग
निरज दाहाल	 श्रावण २९, २०७७ १६:०० मा प्रकाशित
कवि, मुक्तककार तथा गीतकार देवेन्द्र केसी हाल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, काठमाडौँका महाप्रवन्धक हुनुहुन्छ । पोखरामा जन्मनुभएका सर्जक केसीका हालसम्म तीन कृति प्रकाशित छन््— यसरी पोखियो मन (कविता सङ्ग्रह), परेलीभित्रै छु (कविता सङ्ग्रह) तथा मनको पहिरो (मुक्तक सङ्ग्रह) । एउटा गीति एल्बम र मुक्त सङ्ग्रह पनि प्रकाशोन्मुख रहेका छन् । नेपाल र नेपालभन्दा बाहिर पनि नेपाली साहित्य र सङ्गीतको प्रवद्र्धनमा कटिबद्ध केसीलाई निकटबाट चिन्नेहरू भन्छन्, उच्च ओहदामा पुगेर पनि सरलता र विनम्रतामा टेकेर सबैसँग सम्बन्ध अक्षुण्ण राख्ने उहाँ एक दुर्लभ व्यक्ति हो । उहाँसँग साहित्यपोस्टका लागि निरज दाहालले गरेको कुराकारीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरेका छौँ ।
१. नमस्कार । त्रिभुवन विमानस्थलको महाप्रवन्धकजस्तो जिम्मेवार पदमा हुनुहुन्छ । यता सिर्जनामा पनि उत्तिकै सक्रिय हुनुहुन्छ । पदीय जिम्मेवारीले सिर्जनाको उभारलाई रोकेको देखिँदैन । वास्तवमा, यसको गोप्यता के रहेछ ?
धेरै धेरै धन्यवाद प्रश्नका लागि । एअर ट्राफिक कन्ट्रोलर पेशामा आजभन्दा ३२ बर्षअगाडि प्रवेश गरी देशका विभिन्न दुर्गमस्थानहरूमा लामो समय सेवा गरेपश्चात हाल करिब १० महिनादेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रि विमानस्थलको को महाप्रवन्धक पदमा अहोरात्र खटिरहेको छु । कोरोनाको महामारीले विश्व नै आक्रान्त भैरहेको बेला अत्यन्त सावधानीपूर्वक विमानस्थल सञ्चालन गरिरहेका छौँ । स्वदेशी तथा विदेशी यात्रु तथा कार्गो सामानहरू ओसारपसार भैरहेकै छ । यत्ति वेलाका सिर्जना प्रायः रात्रिमा हुने गरेका छन् । ती सिर्जनाले दिनभरि देखेका भोगेका भोगाइलाई प्रस्तुत गर्दछन् । यसो हुँदा थाकेको मन अलि हल्का पनि हुन्छ ।
२. एउटा कोमल सर्जकको आँखाबाट हेर्दा, विमानस्थल प्रवन्धनको प्राविधिक जिम्मेवारी कस्तो देखिन्छ? के कहिल्यै तपाईंभित्रको सर्जक र प्रवन्धकको बीचमा द्वन्द्व भएको अनुभव छ?
सर्जक र प्रवन्धकको तालमेल सकेसम्म मिलाउने प्रयत्नमा छु । यदाकदा मनका भावना नढाँटी प्रस्तुत गर्न खोज्दा सार्वजनिक सञ्चार माध्यमबाट अलिक अलग रहनु निको ठान्दछु ।
३. गीतमा रमाउनुहुन्छ । कविता र मुक्त लेख्नुहुन्छ । यसरी पोखियो मन (कविता), तथा परेलीभित्र छु (मुक्तक) र मनको पहिरो (मुक्तक) यहाँका सिर्जना हुन् । यहाँका सिर्जना सर्सती हेर्दा तिनमा लोक भाकका गीतको प्रस्ट प्रभाव देखिन्छ । गीत पनि लेख्नुहुन्छ । रेकर्डमा पनि जाँदैछन् । गीतसँगको यहाँको साइनोको अलिकति जानकारी पाऊँ न ?
गीत, कविता, मुक्तक कथा वा समग्रमा साहित्य र मानव सेवाप्रतिको लगाव सानैदेखिकै हो । बल्लतल्ल जागिरे जीवनबाट बचेको समयबाट तीनवटा कविता र मुक्तकका पुस्तकका प्रकाशन भए । चौथो मुक्तक सङ्ग्रह र एउटा गीति एल्बम एकैपटक सार्वजनिक गर्ने तयारीमा जुटेको छु । सहयोगी मनहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । गाउँका पाखा–पखेरामा जन्मी—हुर्की खेली–पढी सहर पसेको एउटा कोमल हृदयी मनले गाउँबेसीकै भाका र भावना पस्कन खोज्नु नौलो भएन । लोकभाका सबैले सजिलै बुझ्छन् । मुनामदन जस्तै लोकलयमा स्तरीय गीत, कविता लेख्न पाए पनि पुगिहाल्थ्यो जस्तो लाग्छ । तर पाठकको मन मुटुमा पस्न अनि बस्न सजिलो किन हुन्थ्यो र ! गीत खूब मन पर्छ । हेरौँ कस्तो लेखेको रैछु । समय र श्रोताले बताउनुहोला । वरिष्ठ सङ्गीतकार शक्तिबल्लभज्यूको हात परेपछि कसो राम्रो नहोला र! बडो आशावादी छु ।
४. मुक्तक लेखनमा बढी सक्रिय हुनुहुन्छ । मुक्तक वाचन गरिन्छन्, प्रकाशित हुन्छन्, मुक्तकका समूहहरूमा चर्चामा पनि रहन्छन् । प्रभावशाली विधा पनि हो । तर, बजारमा मुक्तकका कृति खोज्ने पाठकहरू निकै कम देखिन्छन् । बजार कि आख्यानतिर देखिन्छ, कि कवितातिर । यहाँको अनुभव के छ? अलिकति विश्लेषण गरिदिनुस् न?
मलाई त राम्रो लेख्न सके मुक्तक पनि अरू विधाजस्तै शसक्त बिधा लाग्छ । चार लाइनमै भावना पूरै पोख्न पाइने । वाचन कला पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको कुरामा दुईमत हुने कुरै भएन । अझ आफ्नो सिर्जना आफैँले पढ्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ होला । पाठकहरूका आ–आफ्नै रुचि हुन्छन् । उमेरसमूहले पनि फरक संवाद खोज्दोरहेछ । तर राम्रा कृति जुनसुकै विधामा लेखे पनि सफल भइन्छ होला जस्तो लाग्छ । कालजयी र जीवन्त कृति संसारमै थोरै मान्छेले मात्र लेख्न सक्दारहेछन् । तर लगनशीलता र अठोट ठूलो कुरा हो जस्तो लाग्छ । बजार त समय हो । समयसँगै बगिरहन्छ ।
५. पोखरा कलासाहित्यको उर्वर भूमि, यहाँको मूल थलो । पोखराको साहित्यिक माहोलसँग यहाँको कस्तो सान्न्ध्यि रह्यो? प्रभाव कत्तिको पर्यो यहाँको सिर्जनायात्रामा?
पोखरा प्रकृति, कला संस्कृति अनि साहित्यको उर्वर भूमि हो, जहाँ जन्मेकोमा नै आफूलाई गर्व लाग्छ । साहित्य सिर्जनामा होम्मिन सकिनछु । दुःख यसमा छ । सबै अत्यन्त आदरणीय स्थापित साहित्य साधकहरूको सामीप्यमा रहँदा पनि सिर्जनातर्फ ढिलो लागिएछ कि भन्ने अनुभूति भैरहेछ । सायद पढाइ र जागिरले हो । जागिरमा होम्मिनु पहिलो प्राथमिकता थियो होला । पढाइमा विषय पनि विज्ञान छानियो । समय बढी नै दिनुपर्ने ।
६. यहाँसँग सङ्गत गर्ने सबै भन्छन्, ठूलो पदमा आसिन भएर, तथा एक लोकप्रिय कवि र मुक्तककार भएर पनि यहाँ धेरै सरल र मिलनसार हुनुहुन्छ । धेरै मानिसहरू ओहदा र लोकप्रियतामा अलि माथि पुगेपछि सरलता गुमाउँछन् । सरलता कत्तिको ठूलो शक्ति हो? यसलाई अक्षुण्ण राख्नु कत्तिको गाह्रो काम हो?
मलाई ठूलो पदमा पुगेँ भनेजस्तो कहिल्यै लागेन । जागिरमा ईमानको रोजीरोटीमा होम्मिँदा यदाकदा ठक्कर खानु परे पनि लडिहाल्नु परेन । तोकिएको जिम्मेवारीलाई शिरोपर गरी अगाडि बढ्दा सानो गाँठीको मान्छे भएर पनि हो कि सबैको केसी भाइ बनेर हाँस्दै खेल्दै रमाउँदै समाजका हर तह र तप्काका मान्छेहरूसँग सामीप्यता राखी रोजिरोटिमा रमाउँदा ३२ बर्ष बितेको थाहै भएन । फेरि कलेज पढ्न जाऊँ जाऊँ पो लागेको छ । सरलता भएन भने त मान्छेको गहना नै भएन नि! दम्भले त मान्छेलाई रसातलमा पु¥याउँछ ।
७. पछिल्लो समय सिर्जना केले डोयाएजस्तो लाग्छ तपाईंलाई — सर्जकको निजी दृष्टिले, अथवा बजारको हल्लाले? टिकाउ र बिकाउ साहित्यबारे तपाईंको सोच के छ?
आजकल सिर्जनामा इमान्दारी भन्दा व्यापारीकरणका लागि प्रचारप्रसार धेरै हुन थालेको हो कि! राम्रो लेख्नेले होडबाजी गर्न जरुरतै छैन नि । देवकोटाको मुनामदन जत्ति बिक्ने अर्को कृति देखिएन बजारमा अझै । उनले पैसा कमाउन लेखेको कृति हो जस्तो लाग्दैन ।
८. विमानस्थालमा धेरै विदेशी आउनेजाने गर्छन् । धेरैका हातहातमा पुस्तक देखिन्छन् । विमानस्थलमै रहेका पुस्तकघरबाट पनि पुस्तक किन्छन् र पढ्छन् । तर, नेपालीहरूमा त्यस्तो स्वभाव देखिँदैन । तपाईंले विदेशीहरूबीच देख्नुभएको पठनसंस्कृतिबारे अलिकति बताइदिनुस् न?
विदशीहरूका पनि आफ्नै कमजोरी होलान् । हाम्रा पनि आफ्नै कमजोरी होलान् । तर उनीहरू समय खेर फाल्दैनन् । पढिरहन्छन् । हामी गफ चुटिरहन्छौँ । पढ्दा त केही न केही ज्ञान पक्कै बढ्छ होला । उनीहरू साहित्य तथा खोजमूलक कृति पढ्छन् ।
९. कतिपय सरकारी र निजी निकायहरू पनि अचेल कला–साहित्य र संस्कृतिको प्रवद्र्धनमा योगदान पु¥याइरहेका हुन्छन् । आफैँ पत्रिका निकाल्छन्, अथवा कार्यक्रमहरूको प्रायोजन गर्छन् । त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल, विमान कम्पनीहरू, अथवा नागरिक उड्डयन प्राधिकारणमा यहाँको अनुवभ कस्तो छ? यस दिशका के कति योगदान भएका छन्?
प्राधिकरणले तथा वायुसेवा कम्पनीहरूले आ–आफ्ना बिषयसँग सम्बन्धित पुस्तक, जर्नल पत्रिका निकाल्ने क्रममा साहित्य सम्बन्धी बिषयहरू पनि समेटेर वार्षिक, अर्धवार्षिक, मासिक पत्रिकाहरू निकालिरहेका हुन्छन् । ती संस्थाहरूले आफ्ना कर्मचारीहरूका कृति प्रकाशनमा पनि भरथेग गरेको पाइन्छ ।
१०. अन्त्यमा, हाम्रा पाठकहरूका लागि विशेष केही सन्देश छ कि ?
मेरा भावना यहाँहरूले पस्कने अवसर जुटाइदिनुभो, त्यसका लागि सादुुवाद । दोस्रो पाठकहरू भनेका लेखकका लागि भगवान हुन् । भगवान्ले श्रष्टाका कृतिहरूलाई चाख मानेर पढिदिनुहोस् । गल्ती भेटे सच्याउने मौका दिनुहोस् । लेखकहरूलाई माया गरिदिनुहोस् । पुस्तक पढेर प्रतिक्रिया दिनुहोस् । धन्यवाद ।
महान् र मिहिनको चेपबाट